မြို့ထဲမှာ ဖြစ်နေတာတွေ မယုံရင်ကြည့်ကြ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » မြို့ထဲမှာ ဖြစ်နေတာတွေ မယုံရင်ကြည့်ကြ
မြို့ထဲမှာ ဖြစ်နေတာတွေ မယုံရင်ကြည့်ကြ
Posted by Wai Phyoe on Jun 15, 2012 in Contributors, Copy/Paste, Myanma News | 23 comments
မြို့တော်ခန်းမအနီးရှိ ဘန်ဂါလီစွန္နီဂျာမေဗလီအား ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ကတွေ့ရစဉ်
မင်္ဂလာဈေးရှေ့ရှိ ကာလာဘတ်စ်တီး စွန္နီဂျာမေဗလီအား ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ကတွေ့ရစဉ်
အောင်ဆန်းကွင်းရှေ့ တခြမ်းပဲ့ဗလီအနီးရှိ အခြေခံပညာကျောင်းတစ်ကျောင်းအား ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ကတွေ့ရစဉ်
ကျုပ်တို့ဖြင့် ထမင်းတောင်မစားနိုင်ဘူး စိတ်ပူလွန်းလို့ ( ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားတာ)
ဒါကြောင့် စနီ္ဒမြင့်လွင်ကပြောတာပေါ့ ကောလဟာလပြောကြတာက လောကဘဝတဲ့
ကဲကဲ ညနေပိုင်းထိတော့ အေးဆေးဘဲ ညမှ ထဖောက်ရင်တော့ မပြောတတ်
ကောလဟာလ ပြောကြတာက လောကသဘာဝလို့ ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန်
ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ ့ပြည့်စုံပါတယ်ဗျာ။
မင်္ဂလာ အပေါင်း နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သတင်းပါဘဲ မောင်ဝေဖြိုး ရေ။
ဒါဘဲပေါ့၊ ဒါရန်ကုန်လေ၊ (ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး)
ဆူးလေနားမှာ ကုလားတွေရိုက်နေကြပြီတဲ့ (ပလာတာကိုပြောတာပါ)
မနေ့ကတည်းက လုံခြုံရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေ သေသေချာချာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါ။
ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ခေါင်းဆောင်အသီးသီးရဲ့ အခြေအနေကို သဘောပေါက်မှု့နဲ့ တာဝန်သိမှု့ကြောင့်လဲပါပါတယ်။
တွေ ့မိသမျှ ဗလီနားမှာ လုံခြုံရေးရဲတွေလဲ ထားထားတာတွေ ့မိပါရဲ့..
တစ်ချို ့လဲ ကောလဟလကို ယုံပြီး အပြင်မထွက် ၊ လုပ်ငန်းနားထားတာတွေလဲ တွေ ့မိပါရဲ့
ဒါဟာ ကောင်းတဲ့စနစ်လို ့ပြောရင် မမှားပါဘူး…
စိတ်ပူကြသူတွေအတွက် ခုလိုလက်တွေ့ပြသပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်သားတွေပါ။ ဒီလောက်မှ နိုင်ငံရေးနားမလည်ရင်
ခုလို လှည့်ကွက်ထဲဝင်မသွားတော့ သူတို့တွေချီးနဲနဲပိတ်သွားမှာ။
ဒါကြောင့် အမေစု ပြောတာရှင်းတာပေါ့။
နံပါတ်တစ်က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့၊ နံပါတ်နှစ်က လှုံဆော်တဲ့သူများရှိလား
ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပင်မှုပါပဲ… ” ကဲ အမေ တာဝန်ကျေသလို ကျွန်တော်တို့လည်း
တာဝန်ကျေရမှာပေါ့။ အမေစု ကျန်းမာပါစေဗျား။ I Love All.All Love My Country.
လူကြီး၊လူငယ် တွေ ချစ်ချစ် ခင်ခင် ဆွေးနွေး သွားကြတာ၊
ဒီကနေ ့ရလဒ်က အဖြေပဲလေ။
လူငယ်တွေကို လည်းနေရာပေး၊လက်တွဲခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးစေသင့်ပါကြောင်း
အခုပို ့စ်ထဲကလိုမျိုးဘဲ အမြဲတမ်းအေးချမ်းသာယာပါစေဗျား ။
ခုလို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာ သက်သေနှင့်တကွ ပြပေးတဲ့သူရှိတော့ တွေးပူနေရတဲ့သူတွေ စိတ်ချမ်းသာသွားရပြီပေါ့..
အင်းဗျာ အားလုံးညီအကိုတွေလို နေလာကြပြီးမှ ဆက်ပြီးတော့လဲ
ဒီနေ့ ကီကီလေးတောင် ဗုံးပေါက်မယ့် သတင်းကြားလို့
ကိုရင်တော့ ပြောပါတယ်… ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့…
ဘာမှမဖြစ်ရင် … ဘာမှမဖြစ်ဘူး…
မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်နှစ်ခါ သတင်းကြိုထွက်ပြီး
အဲ့တော့… ဖြစ်ကာမှ ဖြစ်ရော…. :?
ကိုရင်နဲ ့ကီကီ တစ်ယောက်
တိမ်ပြာပြာဖရိုင်းဒေး နေ ့တစ်နေ ့ဖြစ်ခဲ့ရလေသတည်း။
ဒီလိုလေး အားလုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်တင်ပေးတဲ့သူကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သတင်းအတွက်ကတော့ကောင်းပါရဲ့ဗျာ ဒါပေမယ့် eleven ကတော့ မန်းဂေဇက်ကို ပြောစရာတွေဖြစ်ကုန်မှာစိုးသဗျာ…
နဲနဲလေးတော့ သတိပြုစေချင်တယ်..eleven ကလဲ ပွင့်လင်းစွာပြောထားတယ်ဆိုတော့လေ..
ကူးရင်လဲကူးကြောင်းလေး ထည့်ရေးပေါ့…..အကူးခံရသူ ကြေနပ်အောင်လို့ပါ…
EMG က မတင်ဖို့ပြောဖူးပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအစိုးရအား တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များစွာရှိပါတယ် တကယ်လို့များပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဘယ်သူ့အဖေခေါ်ရမှန်း မသိသလို အရမ်းထိက်လန့်စရာကောင်းပါတယ် အဲဒီလိုများပြားလှတဲ့ အဖွဲ့တွေကို သစ္စာရှိ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ သူပုန်ကလွှက်ပေးလည်းပြန်လါလျှင် ထောင်ကျမဲ့စစ်သားလေးတွေက နှစ်ပေါင်းမျာစွာအကာအကွယ် ပေးနိုင်ခဲ့လျှင် ဘာမဟုက်တဲ့ တောင်ကုက်လို အကြမ်းဖက်မူ့၊ မောင်တောအကြမ်းဖက်မူ့ လောက်က အမှန်တကယ် ဖြစ်စရာအကြောင်း မရှိနိုင်တဲ့အတွက် အသုံးချဖန်တီးနေမူ့ကို သတိထားပြီး ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားများ ယခင်အတိုင်း ချစ်ခင်စွာ နေပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ပုံ/ ဝံသာနု
အင်… အဲဒီဝံသာနုကြောင့် တောင်ကုတ်(10)ဦးလူသတ်မှုဖြစ်တွားတာမဝုတ်ဘူးလားဟင်…..။